मतपत्रको सुरक्षा ! ग्याबिङ जाली र काँडेतारको घेराभित्र मतगणना ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाली महासंघले रमाईलो शरद सााझ २०१७ आयोजना गर्यो
कतार उड्न लागेको नेपाल आइडल टिमको बिदाई →
भरतपुरले यसरी तर्सायो २ नम्बर प्रदेशलाई
३ असोज, काठमाडौं । प्रदेश २ को अधिकांश स्थानीय तहको मतगणना सुरु भएको छ । सबैजसो मतगणना स्थलमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । अधिकांश मतगणनास्थलमा ग्याबिङ जाली लगाइएको छ । ग्याबिङ जालीको घेराभित्र गणकहरु बसेका छन् भने दलका प्रतिनिधिहरुलाई ग्याबिङ जाली बाहिर राखिएको छ ।
पहिलो चरणको चुनावका क्रममा भरतपुर महानगरमा मतपत्र च्यातिएपछि दोस्रो चरणमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको थियो । तर, यसरी मतगणनास्थलमा ग्याबिङ जाली नै हालिएको भने प्रदेश २ मा मात्रै हो ।
अधिकांश मतगणना स्थलमा ग्याबिङ जाली लगाइएको छ भने महोत्तरीको बर्दीबासमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने काँडेतारको समेत प्रयोग गरिएको छ । नेपालको चुनावी इतिहासमा विगतमा यस्तो दृश्य कहिल्यै देख्न पाइँदैनथ्यो । सभ्य नागरिकहरु भएको समाजमा मतगणनास्थलमा यस्तो जात्रा कहीँ कतै देख्न पाइँदैन । तर, नेपाली राजनीति भने सभ्यतातर्फ भन्दा पनि बर्बरतातर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने यसले प्रश्न उठाएको छ ।
तथापि मतगणनास्थलमा सुरक्षाका लागि अपनाइएको पूर्वसचेतनाले गर्दा भरतपुर काण्ड दोहोरिने सम्भावनालाई पक्कै पनि न्यून गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।(अन्लाईनखबर )